မတ်လ ၂၀၁၈ - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကင်ပိန်း
တစ်လ: မတ်လ 2021
အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးမှတစ်ဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုလမ်းကြောင်း (webinar မှတ်တမ်းတင်ခြင်း)
မတ်လ 31, 2021 1
ပConိပက္ခများဖြေရှင်းရေးတွင်ဂျော့ချ်တောင်းတက္ကသိုလ်မှ MA က“ အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးမှငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းလမ်းကြောင်း - သင်ခန်းစာများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ရမည့်လမ်း” ကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ webinar ၏ဗီဒီယိုယခုရရှိနိုင်ပါသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပConိပက္ခဖြေရှင်းရေးအတွက် Jimmy နှင့် Rosalynn Carter ကျောင်းသည်ပConိပက္ခအားသုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာလက်ထောက်ပါမောက္ခတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းသည်။
မတ်လ 31, 2021 0
ဂျော်မီနှင့် Rosalynn Carter ကျောင်း George Mason တက္ကသိုလ်မှကိုရီးယားကျောင်းပရဝုဏ်အတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပictိပက္ခများဖြေရှင်းရေးကျောင်းသည်သြဂုတ်လ ၂၀၂၁ တွင်စတင်သော Term Assistant Professor ရာထူးလျှောက်ထားရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
မတ်လ 21, 2021 0
နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်မှဤ OpEd ကစနစ်တကျနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုအကြီးအကျယ်ဝန်ပိသောသူများ၏ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုများသည်လူသတ်ခြင်းအပါအ ၀ င်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုမည်သို့ထိခိုက်စေကြောင်းပြသသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာပညာပေးသူများကိုပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာပေးရန်အလေ့အကျင့်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ပုံများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်စိတ်စွန်းကွက်သောစိတ်ထားများ၊ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
[စာအုပ်အသစ်!] Antropocene မှပDecိပက္ခများ၊ လုံခြုံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကျား၊ မ၊
မတ်လ 18, 2021 0
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၂၇ ကြိမ်မြောက် IPRA ညီလာခံအတွက်ပြင်ဆင်ထားသောရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သောဤစာအုပ်တွင်ကမ္ဘာ့တောင်နှင့်ကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းမှစာရေးဆရာ ၂၅ ဦး တို့သည်ပconflictsိပက္ခများ၊ လုံခြုံရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကျား၊ မ၊ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ထုတ်ဝေမှုအသစ် -“ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း - တောင်အာရှမှသင်ယူမှုများ”
မတ်လ 16, 2021 0
Asha Hans၊ Nitya Rao၊ Anjal Prakash နှင့် Amrita Patel တို့၏တည်းဖြတ်မှု၊ ဤစာအုပ်သည်တောင်အာရှရှိကွဲပြားခြားနားသောပထဝီဝင်အနေအထားများနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေများနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကျား၊ ပွင့်လင်း access ကိုယခုရရှိနိုင်ပါ! [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ယူနက်စကို APCEIU မှ ဦး ဆောင်ကျင်းပသောငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးဆိုင်ရာ Dr. Betty Reardon နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
မတ်လ 15, 2021 0
အာရှပစိဖိတ်နိုင်ငံတကာနားလည်မှုပညာရေးစင်တာသည်ကိုရီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနားလည်မှုပညာရေးဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဒေါက်တာဘက်တီရီရာဒွန်းနှင့်ဒေါက်တာရီရာဒွန်စာအုပ်၏“ ပြည့်စုံသောစာအုပ်” ကိုထုတ်ဝေသည့်အခါတွင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး” [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
မတ်လ 10, 2021 0
ဤအပိုင်းအစ၌ဂျွန်ဗလဲန်တန်ကစောဒကတက်သည်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောကျောင်းစနစ်နှင့်ကောင်းမွန်သောကျောင်းတစ်ခု၏ကျွန်ုပ်တို့၏အယူအဆသည်ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကွဲလွဲနေသည် [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
မတ်လ 9, 2021 0
အမျိုးသားများ၏အကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးအစီအစဉ်သည်အမျိုးသားများ၏တိတ်ဆိတ်မှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုအားမဟာမိတ်နှင့်ပြောင်းလဲမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်သည်။ သို့သော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသင့်သည် - MVP သည်အမျိုးသမီးများအပေါ်အခြားအကြမ်းဖက်မှုများအားဖြည့်စွက်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဓိကအချက်မှာအမျိုးသားများအားအဓိကထားခြင်းမဟုတ်ဘဲအမျိုးသမီးများအားလှုပ်ရှားမှု၊ သုတေသနနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုကိုဖြစ်နိုင်သမျှ VAW အဆုံးသတ်ရေးရည်မှန်းချက်ကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
အွန်လိုင်းစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲတွင်ရာသီဥတု၊ ဇီ ၀ မျိုးကွဲများနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေများကို UNEP မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
တိုနီဂျင်ကင် - နိုင်ငံရေးအေဂျင်စီအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးသင်ကြားခြင်း
“ နိုင်ငံရေးအေဂျင်စီကိုပြည်တွင်းမှာထုတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအရာများကိုပြင်ပမှအရေးယူဆောင်ရွက်သည်။ တရားမျှတမှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုစိတ္တဇအတွေးအခေါ်များ၊ Peacelearning သင်ကြားမှုသည်စိတ္တဇအတွေးအခေါ်များကိုကမ္ဘာ၏သင်ယူသူ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှတစ်ဆင့်ရှာဖွေသည်။ -Tony Jenkins [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]